Azo ampiasaina amin'ny ratsy ve ny rindrambaiko maimaimpoana? (Lahatsoratra matotra, momba ny fanitsakitsahan'i JSON ny fahalalahanao) | Avy amin'ny Linux
Azo ampiasaina amin'ny ratsy ve ny rindrambaiko maimaimpoana? (Lahatsoratra matotra, momba ny fanitsakitsahan'i JSON ny fahalalahanao)
Ao amin'ny lahatsoratro teo aloha dia efa nampanantena anao aho ny lahatsoratra iray momba ny fanaovana varotra rindrambaiko maimaimpoana, saingy tsy ho vitako izany, satria manana lisansa CC tsy misy derivatives ilay lahatsoratra voalohany. Raha te hamaky azy ianao, Avelako eto izy ireo. Aza adino ihany koa ny mijery ireo fanehoan-kevitra, satria mbola eo ny dinika. Ny azoko atao lahatsoratra iray dia zavatra novakiako tao amin'ny Muktware fotsiny.
Ity ARTICLE ity dia TSY AMIN'NY FANOMPOANA. TSY TETIKO NY HANATSIKA AN'OLONY AMIN'NY zavatra soratako, HATRANY MARINA IZANY.
Hay izany amin'ny Debian, a bibikely henjana ao amin'ny kaody loharano an'ny mono, milaza fa tsy manaraka ireo DSFG, noho ny fisian'ny fisie rakitra JSON. Inona no mitranga ankehitriny ?. JSON manana fahazoan-dàlana manokana, izay toy ny lisansa MIT nefa misy fehintsoratra fanampiny milaza (INSISTA, TSY BOKY IZANY)
"Ny lozisialy dia ampiasaina amin'ny tsara fa tsy amin'ny ratsy."
"Ny rindrambaiko dia tokony hampiasaina amin'ny tsara fa tsy amin'ny ratsy."
Taiza no nahatonga an'io fehezan-dalàna io a FANDRAHARAM-BOLA amin'ny fahalalahana mampiasa rindrambaiko na inona na inona tanjona (ao anatin'izany ny ratsy)? Douglas crockford, iza no nampalaza azy JSON toy ny safidy maivana ho an'ny XML Manazava izany izy amin'ity horonan-tsary ity.
Amin'ny minitra 39:45 hoy izy manazava
Rehefa apetrako ao amin'ny tranonkalako ny fampiharana ny referansa dia mila mametraka lisansa rindrambaiko eo aminy aho. Nojereko ny fahazoan-dàlana rehetra misy, ary misy maro. Nanapa-kevitra aho fa ny iray tena tiako indrindra dia ny fahazoan-dàlana MIT, izay fampandrenesana apetrakao amin'ny loharanom-pahalalanao, ary hiteny izy hoe: "Azonao atao ny mampiasa an'io amin'ny zavatra tianao, avelao fotsiny ilay fampandrenesana loharano ary tsy mangataka aho. » Tiako izany fahazoan-dàlana izany, tena tsara izany.
Saingy tamin'ny faran'ny 2002 dia efa nanomboka ny ady amin'ny fampihorohoroana izahay, ary hanenjika ireo olon-dratsy miaraka amin'ny filoham-pirenena (Bush), sy ny filoha lefitra (Cheney), ary nahatsapa aho fa nila nanao izany. ny anjarako. Ka nasiako tsipika iray hafa ny licence-ko, izay: "Ny rindrambaiko dia tokony hampiasaina ho tsara fa tsy ho ratsy." Nihevitra aho fa nanao ny asako.
Indray mandeha isan-taona dia mahazo taratasy avy amin'ny curmudgeon iray izay miteny aho hoe: "Tsy maintsy manana zoko hampiasa izany amin'ny ratsy aho! Tsy hampiasa azy io aho raha tsy manova lisansa ianao! " Na manoratra amiko izy ireo: 'Ahoana no ahalalako na ratsy fanahy izy na tsia? Heveriko fa tsy ratsy, fa mety hisy hieritreritra hoe ratsy izy, ka tsy hampiasa azy io aho. " Tsara, miasa ny fahazoan-dàlana, ajanoko ireo olon-dratsy ireo!
Mpikambana: Raha mangataka fahazoan-dàlana hafa ianao, azonao atao ve ny mampiasa azy io amin'ny ratsy?
Douglas: Hevitra mahaliana io. Indray mandeha isan-taona ihany koa, mahazo taratasy avy amin'ny mpisolovava iray aho, isan-taona mpisolovava hafa, ao amin'ny orinasa iray -Tsy te-hampahamenatra ny orinasa amin'ny filazako ny anarany aho, ka hiteny ny voaloham-bokatra–IBM…… milaza fa te hampiasa zavatra nosoratako izy ireo. Satria apetrako amin'ny zavatra soratako rehetra izany. Te hampiasa zavatra nosoratako tamin'ny zavatra nosoratany izy ireo, ary azon'izy ireo antoka fa tsy hampiasa izany amin'ny ratsy izy ireo, saingy tsy afaka manome toky ny mpifanaraka aminy izy ireo. Azonao atao ve ny manome azy ireo lisansa manokana? Mazava ho azy. Ary novaliako izy ireo - nitranga izany ara-bakiteny roa herinandro lasa izay - "Omeko alalana amin'ny IBM, ny mpanjifany, ny mpiara-miombon'antoka ary ny mpiara-miasa aminy ny JSLint hampiasa ny ratsy." Ary namaly ilay mpisolovava, "Misaotra betsaka, Douglas!"
Saingy satria malalaka loatra ny fandikana ny dikanteny ary tena manjavozavo, noho izany antony izany, ilay rindrambaiko izay mampiasa ireo tranomboky JSON tsy azo heverina ho afaka, na avy amin'ny Debian, na koa ho an'ny RedHat / Fedora, na koa ho an'ny Kaody Google. Raha toa ny mpisolovava tompon'andraikitra amin'ny fahazoan-dàlana tompon'andraikitra azo antenaina fa tsy dia manana vazivazy kely noho ny mpandahatra fandaharana, misy koa ireo mpandraharaha izay tsy manao izany koa. Fair Jo ampinga, iray amin'ireo mpihazona ny mono en Debian Iray amin'izany. Hoy izy:
"Malalaka izy misafidy ny fahazoan-dàlana ary malalaka aho mitsikera azy noho ny nisafidianany fahazoan-dàlana FOSS mody sy nataony toy ny praiminisitra mihomehy." (Uuuuhhhhh)
Ary efa fantatsika mazava tsara ny famaritana ny rindrambaiko maimaimpoana. Ny programa dia tsy maimaimpoana raha misy famerana ny fampiasana azy, na dia natao ho an'ny ratsy aza. Linus Torvalds taona vitsivitsy lasa izay dia nanome ohatra:
«Raha mpahay siansa adala ianao dia afaka mampiasa rindrambaiko ambanin'ny GPLv2 ho an'ny drafi-dratsy hizaka an'izao tontolo izao («Antsantsa misy laser ao an-dohany !!«) Ary milaza ny GPLv2 fa tsy maintsy averinao ny kaody loharano. Ary amiko tsy maninona. Tiako ny antsantsa misy laser. Te-hamaly ahy fotsiny ireo mpahay siansa adala amin'izao tontolo izao. Nataoko misy code ho azy ireo, tsy maintsy ataon'izy ireo ho ahy. Aorian'izay dia azon'izy ireo endasina amin'ny lasera amiko izay tiany. "
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Azo ampiasaina amin'ny ratsy ve ny rindrambaiko maimaimpoana? (Lahatsoratra matotra, momba ny fanitsakitsahan'i JSON ny fahalalahanao)
xDDDD Miala tsiny, fantatro fa matotra ilay lahatsoratra fa tsy afaka mitsahatra mihomehy xDDDD aho
Lahatsoratra tsara sy fanontaniana miavaka, izay manome antsika hieritreritra sy be dia be.
Ataovy ao an-tsaina fa ny "ratsy" dia miantoka fa tsy kely ho an'ny tolotra ataon'izy ireo. Ka raha mandoa vola izy ireo dia tokony handoa, sa tsy izany?. Fantatrao ve hoe inona ny vidin'ny biby goavambe toa an'i Welwes 8? Tsy ny olon-drehetra no afaka mahazo fidirana amin'ny dragona amin'ity sokajy ity na dia tiany aza.
Tsy milaza na inona na inona aho amin'ny famoahana Linux amin'ny asa na serivisy sasany, fa maimaim-poana sy maimaim-poana ny fidirana amin'ny solosaina ary amin'ny "ratsy", tsia. Izy ireo aza dia manome vola anao amin'ny miaina.
Heveriko fa betsaka ny "lamba" eto hokapaina ary tsy mifanaraka amin'ny fanehoan-kevitra tsotra izany.
Ary nanao programa iray aho mba hahafahako manao voodoo avy amin'ny solosaina findainy ary mampidina ny vidin'ny MacBook Air 11… ..
# sudo apt-mahazo mametraka voodoo
# sudo voodoo macbook-air-11 nihena
Shit ... Hadinoko ny png an'ny labozia mainty, tsy mahagaga raha tsy misy na inona na inona.
kondur-05 dia hoy izy:
hehe hehe mampihomehy izany, nefa miaraka amin'izay dia matotra be ilay lohahevitra
Valiny amin'ny kondur-05
Ny marina dia tsy fantatro izay karazana fahazoan-dàlana isaky ny programa napetrako sy ireo zavatra avelany hataoko ary inona no tsy.
dasht0 dia hoy izy:
Tsy afaka nifehy ny fihomehezana koa aho, na dia matotra aza ity patanty ity.
Lahatsoratra tena tsara!
Valiny amin'ny dasht0
Tena raharaha matotra tokoa io raha ny marina. Manokana, raha raisintsika ny fiheverana fa ny fitaovam-piadiana haitao avo lenta isan-karazany dia tantanan'ny rindrambaiko.
Malemy izany. tokony ho afaka ve aho?
Na, amin'ny lafiny hafa, afaka / tokony hampiasa rindrambaiko maimaim-poana amin'ny fampandrosoana miaramila?
Avelako hanohy ny fandinihana ity lahatsoratra taloha ity: http://usemoslinux.blogspot.com/2012/08/esta-bien-que-linux-se-use-en.html
Zavatra roa no nianarako:
Voalohany. Na ny mpisolovava faran'izay maditra aza dia manana etika ampy hanatanterahana tanjona ratsy nefa tsy mandika lalàna.
Faharoa. Ny rindrambaiko maimaimpoana dia mazava tsara momba ny tontolon'ny etika iorenan'ny fahafahany. Izay ataon'ny mpampiasa farany amin'izany dia avela amin'ny feon'ny fieritreretany na ny fitondran-tenany izany, afaka manao izay tiany izy.
Ny lahatsoratra tsara indrindra amin'ny tantaran'ny DesdeLinux. Hahaha !!! 🙂
Azoko tsara fa tena matotra ilay olana, noho ny antony tsy dia malalaka i JSON satria mody manao izany ary mitady ho anisan'ny vondrom-piarahamonina manana lalàna efa napetraka ...
… TPT !! XDD !! Miala tsiny aho fa tsy vitako ny nihomehy kely satria eo anelanelan'ny Linus sy Douglas, tsara, na ny fomba hanaovana serieux. Fa izao kosa ny amin'ny raharaha.
Rehefa avy namaky ilay lahatsoratra sy ireo hevitra (sy ho an'ny rakitsoratra izay saika nihomehy koa ny rehetra), tonga tao an-tsainao io fehezanteny io izay manao hoe "Tapitra ny zon'ialahy manomboka ny ahy" ary ny zon'ny fahalalahana hanao izay mamely anay dia tiako hoheverina fa miafara amin'izay manomboka ny an'ny olon-kafa (ny zo hiaina fa tsy ho faty eo an-tanan'ny antsantsa misy taratra laser)
Heveriko fa io dia iray amin'ireo olana tokony hiadian-kevitra matotra (ary mazava ho azy fa tsy manasa an'i Douglas sy Linus noho ny antony mazava XD), na ara-bakiteny ny fahalalahana, na araka ny nolazain'i Carlos-Xfce ary amin'iza no ekeko «Ny rindrambaiko malalaka dia mazava be momba ny tontolon'ny etika iorenan'ny fahalalahany ”(averiko ara-bakiteny izany, mba tsy hanana lisansa ihany koa ny heviny).
Tena ahona tokoa ity lisansa ity. Fa hey, hovaliako hatrany ireo hevitra avy amin'ny fiarahamonina
Raha te hahalala raha ampiasaina amin'ny ratsy ny rindrambaiko iray dia tsy maintsy valianao izao manaraka izao: Inona no ratsy? Raha mandalo ao amin'ny Tao isika, ny hetsika tsara rehetra dia misy ohatra ratsy ary mifanohitra amin'izany, manaraka an'io eritreritra io, na dia nampiasaina (raha lazaina ho hypothètique) ho an'ny ratsy, izany hetsika izany dia mety hanana ohatra tsara, izay raha tsy haharitra ela kokoa io dia hamorona paradox moraly ... ary amin'ny farany tsy misy hatao ...
Raha mandeha amin'io lalana io isika dia tsy misy na inona na inona amin'ny eritreretintsika fa misy, na mena mena, na manga manga, na mamy mamy, na mangidy izany. Tsy sady mafy no tsy mifatotra araka ny fahitantsika azy satria amin'ny ambaratonga ambanin'ny tany dia tsy misy zavatra matevina azo raisina toy izany, ka mifoka sigara ny vato avy eo, na ny ankehitriny, na ny taloha, na ny ho avy no tena eritreretintsika satria ny fotoana dia tsy nifandimbiasan'ny fotoana, tsy nisy noforonina ary tsy hitsahatra ny hisy satria na ny zavatra na ny angovo na forona na nopotehina dia miova ihany, sns., hadalana tsy misy farany izay tsy misy na inona na inona satria be dia be ny zavatra rehetra. afaka ho.
Lahatsoratra tsara. Tsy noho ny fananana ny anjarany amin'ny toe-javatra mampihomehy dia tsy mitaky fandinihana.
Mampahatsiahy ahy izany fa indray mandeha aho dia nieritreritra ny hizara rindrambaiko fitantanana latabatra DBF kely izay nataoko, ary tamin'ny fahalemeko dia nanomana lisansa tena mitovy amin'ny MIT miaraka amina andininy momba ny fampiasana etika ny fampiharana (araka ny nahitako ny hafa tamin'ny farany fandaharana maimaimpoana tsara kokoa, tsy azoko ny nizara ilay fampiharana).
Saingy taty aoriana dia (nianatra ireo fitsipiky ny rindrambaiko maimaimpoana) no nahafantarako ny antony tsy tokony hametrahana fehezan-dalàna etika ao anaty lisansa rindrambaiko malalaka izay manakana ny fahalalahan'ny fampiasana. Raha jerena voalohany, dia mety ho toa ny tsy avo, misokatra ny fahafaha-mampiasa rindrambaiko hanao ratsy, fa ho an'ny mpamorona rindrambaiko maimaimpoana dia sarotra loatra, lafo ary tsy etika ny fanarahana ny fampiasana ny rindrambaiko, ary na dia Raha fampiasana tsy etika no ampiasaina dia tsy misy na inona na inona mivantana azon'ilay mpamorona atao hisorohana azy, noho izany dia mila miantehitra amin'ny lalàna izy ireo. Ary mitranga fa ny tena hisorohana ny fanaovan-dratsy dia ny fisian'ny lalàna, ka amin'ny fahazoan-dàlana iray dia tsy mila mandray fahefana ianao.
Etsy ankilany, efa hitantsika hatrany ny fomba fampiasana lalàna hiadiana amin'ny ratsy sy ny asa fampihorohoroana mba hiarovana ny tombontsoam-panjakana na ny governemanta ary hampiharina amin'ny fomba etika nefa mampiahiahy, farafaharatsiny momba ny fahalalahan'ny lalàm-panorenan'ny olom-pirenena.
Noho izany ny mpampiasa dia tokony hisoroka ny fihanaky ny fahazoan-dàlana tsy ilaina ary manatona mpisolovava avy amina orinasa ekena ao an-tsaha hanampy azy ireo hisafidy ny fahazoan-dàlana mety, na GPL, MIT, sns.
Tsotra sy mahitsy, raha rindrambaiko maimaimpoana izany dia tsara izany satria manao izay tianao ianao.
«Mamakafaka ny kaody antsantsa miaraka amin'ny laser aho ary miorina amin'izany, satria afaka aho, manova azy aho mba hamoronana countermeasure miaraka amin'ny angisy goavam-be miaraka amin'ny laser lavitra»
Noho ny rindrambaiko maimaimpoana dia mivoatra ny hevitra sy ny hevitra tsara kokoa izay manala ny hevitra taloha, satria ny hevitra vaovao dia miorina amin'ny hevitra taloha ary manatsara.
Azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny ratsy fa hisy zavatra tsara kokoa foana hanakanana azy io satria afaka mamorona antsantsa miaraka amin'ny laser daholo isika rehetra raha vao mahita ny kaody ary manova ny antsantsa ho an'ny trozona mpamono olona na angisy goavambe.
Ary tsy nisy nihevitra ny fork? Mamela izany ve ny lisansa MIT novainao?
Misaotra betsaka tamin'ny fanehoan-kevitra. Ny antony nametrahako lahatsoratra matotra dia satria nanantena fanamarihana matotra aho (toa an'i Pablo). Raisina am-pahamatorana tokoa ny fahazoan-dàlana amin'ny lozisialy amin'izao fotoana izao ka mahatonga anao haniry hanao trolling ara-dalàna miaraka amin'ireo fahazoan-dàlana toa ny JSON, ny Do What The F * ck Tianao ho Fahazoan-dàlana ho an'ny daholobe, ny fahazoan-dàlan'ny labiera ……… .na na ny licence SQLite izay ao ny sehatra ho an'ny daholobe miaraka amin'ny tsodrano
Enga anie ianao hanao ny tsara fa tsy ny ratsy
Enga anie ianao hahita famelan-keloka ho an'ny tenanao sy hamela ny hafa
Enga anie ianao hizara malalaka, tsy handray mihoatra ny omenao.
Voalohany, tsy afaka ny hihomehy ilay lahatsoratra aho, na dia mikasika lohahevitra tena matotra aza, satria ny firesahana momba ny fahazoan-dàlana amin'izao fotoana izao dia miteraka fanehoan-kevitra rehetra, fa ny fihomehezana no tsy fahita matetika.
Raha misy zavatra manintona ny saiko ary mazava ho azy fa manao ahoana ny fandraisan'ny mpisolovava an'i Etazonia raharaha an'io raharaha io, ary tsy azo atao izany, satria ny fitoriana noho ny fampiasa tsy ara-dalàna ny fahazoan-dàlana no fahanana betsaka isan'andro. Fa raha mandroso kely kokoa isika, dia ho hitantsika fa ireo 'mpisolovava manimba', araka ny fiantsoan'ny namana Carlos-Xfce azy ireo, dia tsy adaladala mihitsy, satria ao amin'io firenena io, ny lalàna na dia toa tsy misy dikany aza izy ireo (ary tena tsy mazava mihitsy aza ), eo izy ireo hanatanteraka azy ireo, ka ireo mpisolovava manokana ireo dia tsy nanao afa-tsy ny niaro ny mpanjifany, izay no tena resaka.
Etsy ankilany, tiako ny hisaintsaina ny fon'ny raharaha izay ilay andian-teny hoe "Ny rindrambaiko dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny tsara fa tsy amin'ny ratsy." Eto dia misy lamba hokapohana, satria ny fandikana ny tsara na ny ratsy dia miankina amin'ny fandikan'ny olona tsirairay, ary hatramin'ny fotoana (fotoana manokana) nanaovana ny fandikana.
Resy lahatra aho fa na ireo izay ny ankamaroan'ny olona aza dia mihevitra ny mampiavaka ny ratsy ankehitriny (ary eto ny tsirairay dia afaka mametraka ny anarana hoe 'olon-dratsy' safidiny), mino tanteraka fa ny fihetsik'izy ireo dia mamaly ny 'antony tsara'. Andeha isika hitadidy ny tantara; Taonjato maro lasa izay, hitan'ny maro an'isa ho 'tsara' ny heretika, ankehitriny, ny fitoraham-bato ny lehilahy miray amin'ny lehilahy na ny mpanitsakitsa-bady dia 'tsara' ho an'ny olona an-tapitrisany, koa inona no tsara sy inona no ratsy? Mampalahelo fa tsy ny vaton'ny maro an'isa no mamaritra ny 'marina'.
Ny finoana fa ny fihetsiky ny tsirairay dia mifanaraka amin'ny antony tsara dia mety mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny tsirairay miaro izany. Saingy tsy midika izany fa rariny ho an'ny rehetra io antony io. Mazava ho azy fa tokony harahina ireo lalàna. Fa inona no mitranga rehefa tsy ara-drariny ny lalàna iray satria manimba ny maro ary mahazo tombony vitsivitsy? Angamba ny fahefana namorona an'io lalàna io dia nanao izany tamin'ny fe-potoana faniriana hiaro saranga sosialy iray? Etsy ankilany, tsy mino an'ity tranga ity mihitsy aho, amin'ny fahatsiarovana ara-tantara. Heveriko fa hatramin'ny namoronana ny afo, ny olombelona dia niaina fandrosoana iray, na dia miadana aza, mandroso ary mikasika ny rindrambaiko, izay mazava ho azy ankehitriny, dia tokony ho maimaimpoana sy ho azon'ny rehetra zahana ary raha ampangaina amin'ny ampihimamba iray ny fanomezana serivisy iray. , Tokony ho izy ihany koa fa tamin'ny fomba hafa. na tsia?
Mitranga ihany koa fa ny firenena samy hafa na ny fanjakana isan-karazany ao anatin'ny firenena iray aza dia mety hanana lalàna samihafa amin'ny lafiny iray. Izany no mahatonga ny fahazoan-dàlana matetika sarotra soratana, satria tsy maintsy ho ankapobeny sy manokana amin'ny fotoana iray izy ireo, ary mazava ho azy, tsy dia mazava loatra araka izay azo atao.
Amin'ity tranga ity, satria ny fahazoan-dàlana tsy manazava izay heveriny ho "manao ratsy", dia azo heverina ho tsy mazava izy io, satria avelany hisy fandikana maimaimpoana. Ho an'izany, tsara kokoa ny tsy mametraka azy io, satria samy handika azy araka izay itiavany azy ny tsirairay.
Eny, tamin'ny voalohany dia nihomehy aho, fa ankehitriny miaraka amin'ny vaovao vao levona kokoa (ary mitsiky kely fotsiny) dia mieritreritra zavatra 2 aho. Amin'ny lafiny iray, i Douglas dia mampandroso ny toekarena amin'ny alàlan'ny Oo! ENY, satria mpisolovava ianao, ary na iza na iza lafiny misy anao, dia azo antoka fa tsy maintsy nanao ianao ary nanao tolo-kevitra tsy manam-petra na handresena fitsarana ary hahazo koba tena tsara. Ny hany resy dia ireo mpampiasa, ary ireo olona liana amin'ny fampiasana rindrambaiko sasany na hafa.
Ahoana raha heveriko fa mety izany, ary amin'ny tranga manokana manokana dia ho mazava kokoa sy voafaritra tsara aho amin'ny alalànako, raha toa ka mametraka faritra izay nolazaiko fa mandrara ny fampiasana ady, na mandratra olon-kafa miaraka amiko. tanjona efa voalahatra.
Andao hojerentsika, ahoana ny hevitrao? Ny hevitro dia ny hitady ny hamolavola ny tanjona voalohany. Azoko tsara ny rindrambaiko maimaimpoana, ary azoko fa ny fehezan-dalàna toy izao dia hametra ny fampiasana azy maimaim-poana, saingy mino aho fa amin'ny maha mpamorona ahy dia manana "fahalalahana" aho fa ny fahalalako dia tsy nampiasaina tamin'ny tanjona heveriko fa tsy mety ary i Hiroshima sy Hiroshima dia tsy averimberina.
Andao haka ny ohatrao amin'ny ady. Raha misy manafika ny firenenao ary mila miaro tena amin'ny ady amin'ny fiankinana amin'ny rindrambaikoo ianao, hijanona tsy hanao azy io ve ianao?
Ankoatr'izay, tsy mazava ihany koa ny mandratra olon-kafa. Misy ny olona mahatsiaro maharary noho ny filazanao azy ireo fahamarinana roa (na amin'ny fomba tsara sy manorina aza).
Tsy misy na inona na inona, tsara kokoa raha tsy apetraka ao amin'ny lisansa rindrambaiko maimaim-poana, fe-potoana, ireo fehezan'ity karazana ity. Amin'izay fotoana izay vao tena hanolotra fahalalahana fampiasana.
Andao hojerentsika, ohatra, amin'ny ohatra iray hafa: afaka mampiasa antsy ianao hanapahana karaoty, fonosana trondro, na hatoka olona iray (amin'izay dia hisambotra anao tokoa ny polisy ary hametraka anao ny fepetra sahaza anao ny lalàna), ary mba hiarovana anao ihany koa raha misy mitady hamono anao (izay mazava ho azy fa mety hisy akony ara-dalàna koa raha mamono ilay iray hafa ianao), saingy tsy midika izany fa misy antsy mandrara ny fampiasan'izy ireo hanao ratsy. Antsy no ampiasaina hanapahana, fe-potoana. Ho an'ny fihetsika tsy mendrika eo amin'ny fiaraha-monina dia misy lalàna sy vatana mpiaro (na dia tsy mandeha amin'ny fomba mety foana aza izy ireo).
Raha ny momba ny fampiasana azy dia faritan'ny mpampiasa sy amin'ny tsy fahazotoana manao ratsy dia marina ianao. Fa rehefa ady, dia hitako fa ny ady rehetra dia samy manana ny mahaliana azy amin'izay lazainy amin'ny fomba ofisialy; ary amin'ny ahy manokana dia tsy tiako ny mahita fa misy ny ainy ary misy ifandraisany amin'izany aho. Fa marina ny anao, ahoana ny amin'ny fiarovana. Carai, misavoritaka be!
Tsy te hamaivaniko ity olana iray manontolo ity, ary tsy midika ho ilay lahatsoratra aho satria manome fomba fijery mahaliana momba ny fampiasana moraly sy etika tsy voarohirohy amin'ny sehatry ny rindrambaiko sy ny solosaina ao ambadik'izany ... Fa ny tiako holazaina dia ny asio ohatra; fikambanana mpampihorohoro / mpamily / mpivarotra zava-mahadomelina / sns ... izay mahazo fidiram-bola sy tombony amin'ny alàlan'ny fomba fanao tsy mendrika sy maloto ara-dalàna (fantaro ny fanondranana zava-mahadomelina / olona, ​​ady sns ...), tena misy manantena mpivady roa andalana an-tsoratra izay milaza fa "aza manao ratsy" dia hosamborin'izy ireo ireo karazan'olona ireo?
Angamba ny karazan'olona niresahana ity andininy ity, tsy ilay karazan'olona miahy ny amboaram-pahefana mitondra ny lalàna amin'ny Arc de Triomphe ho an'ny tombontsoany manokana ve?
Mitandrema dia hoy izy:
Ny zava-mitranga dia ny "ho an'ny ratsy" dia mitombina ary avy amin'ny Amerikana elatra havanana izay natsofok'i Bush sy orinasa.
Mamaly an'i Cautela
Aran non ei Catalonha dia hoy izy:
"Nanomboka ny ady amin'ny asa fampihorohoroana izahay, ary nanenjika an'ireo olon-dratsy niaraka tamin'ny filoham-pirenena (Bush), ary ny filoha lefitra (Cheney)"
Fa raha ny bandy ratsy no izy ireo, ny anglo-amerikanina !! Ary manana ny mahamenatra anao ve ianao milaza fa tsy ampiasaina amin'ny ratsy ny kaody anao? xDD
Mamaly an'i Arán non ei Catalonha
Jose Cruz Chavez dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, ary fanontaniana tsara be.
Mamaly an'i jose cruz chavez
Olana amin'ny fametrahana ESET NOD32 amin'ny Ubuntu 11.04 mandroso
Inona no mampiavaka ny fizarana GNU / Linux amin'ny hafa?